Gịnị na-eme Everesting na ịgba ígwè? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Everesting ịgba ígwè - inogide ngwọta
Everesting ịgba ígwè - inogide ngwọta
Gịnị na-eme Everesting na ịgba ígwè?
Udochibụ ihe omume na nkendị na-agba ígwèrịgoro ma gbadata ugwu e nyere ọtụtụ ugboro, iji wee rịa elu elu 8,848 mita (elu nke UgwuEverest).
(egwu egwu) - Anọ m ebe a mara mma Alta Badia mara mma n'ihi na m ga-anwale Everesting. Na ihe bụ Everesting? Anụrụ m ụfọdụ n'ime gị na-ajụ. Ọfọn, echiche a bụ nke ugwu, ugwu ụfọdụ, ka anyị chee ya ihu, e nwere ọtụtụ n'ime ha ebe a, ma na-agbago na ala ruo mgbe ị rutere uru mgbago Everest, nke bụ 8,848 mita dị elu karịa oke osimiri ma ọ bụ 29,028 ụkwụ ụgha.
otu igwe kwụ otu ebe
Echiche nke Everesting bụ onye otu nwoke aha ya bụ George Mallory chepụtara. Mba, ọbụghị nke a, n’agbanyeghi na ha nwere njikọ. George Mallory a bụ nwa nwa nke George Mallory, onye nwụrụ n'ụzọ nwute mgbe ọ chọrọ ịbụ onye mbụ ịrịgo Everest na 1924.
Ọ zụrụ azụ n'ezieNa ịrịgo ugwu Everest n'onwe ya yana akụkụ nke ọzụzụ ya, ọ bịara n'echiche nke Everesting site na igwe kwụ otu ebe. Ya mere, gịnị kpatara ị ga-eji nweta ihe ịma aka na-atọ ọchị dị ka Everesting? Ọfọn, mgbe onye mbụ George Mallory na-eme atụmatụ ịrị Ugwu Everest, ndị nta akụkọ jụrụ ya mgbe ahụ, gịnị kpatara ya? Azịza ya dị mfe, ee, bụ, 'N'ihi na ọ dị ebe ahụ. 'Otu ụdị ịgba mgba ahụ bụ eziokwu nye m.
Echere m na dị ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè, ọ na-agụ anyị agụụ ịrị ugwu na ịhụ ihe anyị na-eme. 'Enwere m ike ya. Ma, ịmara, achọrọ m ịme nke ahụ, achọrọ m ịga na oke m ma mara na ị nwere nke ahụ.
Kedu ịrịgo m na-aga Everest? Ọfọn, azịza ya bụ Passo di Valparola, ọ nọkwa ebe ahụ. Ọ mara ezigbo mma. Ọ dị kilomita itoolu na ọkwa 5.8%.
Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ ihe dịka 4.5% na ọkara dị ala na ihe dịka 8% na ọkara nke abụọ, ghọrọ Ihe dị iche na elu ịrị ugwu a bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 800, nke pụtara na m ga-eme 11.5 reps, ka anyị kwuo 12 reps, iji jide n'aka .
Isi ihe mere ị ga - eji mara ugbu a ihe kpatara m ji họrọ ya bụ n'ihi na enwere otu ihe gbasara Everesting na nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị bụ onye izizi nke gbagoro Everest nke ọma, ị ga - enweta aha gị na Everesting Hall of Fame ruo mgbe ebighi ebi, na enweghị ike ịnara m ya, yabụ ọ bụrụ na m nwee ihe ịga nke ọma, a ga-akpọba m n'ụlọ nzukọ Everesting nke ama n'ihi na ọ nweghị onye rịgoro ugwu a iji mee Everesting, ugbu a agaghị m abụ onye mbụ ịrịgo Everestor, gbagoo ọnwa ma ọ bụ soro Kate Upton na-aga, mana enwere m ike ịbụ onye izizi ga - eme iri abụọ na abụọ na-arịgo elu nke Passo di Valparolain na awa iri abụọ na anọ, na m na-ekwu na ọ dị aka nri n'ebe ahụ na-atụ m ụjọ. Ọ bụ Gunna ka ị gafee karịa m na-agbago mbụ, jiri mita kwụ ọtọ karịa ka m gbatụrụla, na ime ihe n'eziokwu, enweghị m n'aka na m nwere ike ime nke ahụ, na, mana ụdị m masịrị ya n'ihi na Ọ pụtara na ọ dịghị ihe bara uru ịgbalịsi ike maka dị mfe, na mgbe m mere nke ahụ, ọ ga-eju m anya. Enwere m ngwa m maka echi, yabụ.
Enwere ụfọdụ ihe dị mkpa, yabụ m ga-agafe ihe m ga-eji. Nke mbụ bụ na echi, ihu igwe agaghị adị mma. Um, ọ nwere ike ịbụ ihe dị ka ogo ise n'ụlọ elu, nke na-eme ka ọ dị jụụ, ọ na-adịkwa jụụ mgbe anyị na-apụ n'ụtụtụ ma mmiri nwere ike izo ntakịrị n'ehihie, yabụ ngwa m na-egosipụta nke ahụ.
Enwere m ọmarịcha akwa oyi akwa, enwere m uwe elu na uwe dị mkpụmkpụ, m na-eyi ikpere na ogwe aka, mgbe ahụ ana m ejikwa akwa ahụ mara mma nke na-agbakwunye ntakịrị ọkụ, gbakwunyere ụfọdụ mkpịsị ụkwụ na okpu. Ugbu a enwere m otu oke nri ebe a ị nwere ike ịhụ. Ọfọn, ihe bụ, Anaghị m ewere nri a niile, nke a ga-abụ nnukwu ibu oge ọ bụla m ga-ebu ya.
Atụmatụ m bụ ịchekwa ọtụtụ nri na họtel ahụ, ka anyị mee? Anọ m na họtel na Fedora, nke dị na nrịgo. Nke a dị mma n'ihi na ọ nwere ike ịbụ ogige m Everesting, ma ọ bụ dịka m chọrọ ịkpọ ya mgboagha. Ihe ndị ọzọ m nwere, akpụkpọ ụkwụ, nwetara ọmarịcha okpu agha Kask Valegro nke dị oke ọkụ, wee nweta nche anwụ Roka, ikekwe ngwa ngwa kachasị mkpa, nwetara Wahoo bolt nke a na-akwụ ụgwọ n'enweghị nsogbu.
Nwekwara ihe nlekota obi iji meziwanye ije m. Obere ihe, na-agba tubular taya na canyon. Ya mere enwerem ihe mkpuchi na mgbapụta Amachila ya, enwere m igwe elekere nke di na mgbochi mgboagha na họtel ka m wee gbadata wee gbapụ wiil ndị ahụ.
Enwekwara ọkụ abụọ. Enwekwara m ọtụtụ ngwa ndị ọzọ ebe a. Kit nke m chere na achọghị m, mana enwere ike.
Ihe dị ka akwa jaket mmiri dị arọ. Olile anya na achoghi m nke ahu. Socks dochie anya na nke ahụ pụtara, mgbe ihu igwe na-adị njọ nke ukwuu, nke a dị ka jaket ASOS Mille ọhụrụ.
Nwee ụfọdụ mkpuchi anwụ. Banyere nri, enwere m ọtụtụ gels, ụfọdụ griin caffeine, ụfọdụ obere kọfị si SIS. Enwetara m ụda mmanya nke oge oyi, mana m ga-enwetara m onwe m ma ọ bụ ihe ọ bụla n'ụzọ.
Enwere ọtụtụ nkwụsị ga-akwụsị n'ugwu a, yabụ re ady. (meditative music) Naanị n'ime ụlọ nkwari akụ ugbu a, na-ebu ụzọ hie ụra, ihe ịma aka echi, na ee, ọ bụ n'ezie ụjọ. Know mara, abughi m ọkachamara, a na m enweghi mkpụrụ ndụ ihe nketa, na-egosi n'ụzọ doro anya (ịchị ọchị) Um, na nkụda mmụọ, enwere m ike ị takeụ ọgwụ niile na ụwa ma enwebeghị ike imeri Tour de France. (ọchị) Ma, um, echere m na nke a bụ ihe ịma aka ike nke uche, ị maara? Agaghị m agbasi ike dị ka pro, mana enwere m ike isi ike? Echere m na nke a ga-akpali m na njedebe ahụ.
Mana ụjọ na-atụ m. Echere m, ụjọ na-atụ m karịa obere nwa obere nwanyị nọn na-aga ịmị penguin. Ọ na-abụ ihe dịka elekere isii nke ụtụtụ, ọ ka gbara ọchịchịrị, anwụ achabeghị.
Olileanya na anyanwụ ga-abịa mgbe anyị gwụchara ite mbụ, nke ga-adị mma. Naanị m chọrọ ịmalite, echere m. Oh, chi m, ọ dị mma - Aga m ahụ gị ala ebe ahụ - Aga m ahụ gị ala ebe ahụ. (Egwu na-akpali akpali) - Ollie, ọchịchịrị gbara ọchịchịrị.
Gini mere anyi ji bido n’oge? - Ọ dị mma, nke ahụ bụ akụkụ nke usoro atụmatụ m akọwapụtara nke ọma.- Ọ dị mma.- Ọfọn, ihe ahụ bụ, anyị nwere ihe dịka elekere 13 nke ìhè.- Uh-huh.- Ma echere m na ọ ga-ewe ogologo oge karịa awa 13. á »‹ na-eche nke dá »‹ nná »á» ngwa ngwa kará »‹ gá »‹ na-eme dá »‹ ot many many ugboro ugboro n'ime ájá? (Ollie na-achị ọchị) - Ah, echere m na m ga-aga ọsọ ọsọ dị ka o kwere mee, ịgwa gị eziokwu - Ya mere, otu ajụjụ ọzọ - Ee? - Gịnị mere i ji họrọ ọrịrị a? Ọ na-adị ka ọ nwere ọtụtụ flatness.
Ọ bụ naanị n'ihi na ịchọrọ ịnọ na Hall of Fame na nke a bụ nkwalite ikpeazụ gị? ? (Ollie na-achị ọchị) - Ọfọn, enwere ọtụtụ ịrịgo, mana ee, ihe na-ezighi ezi banyere ịrịgo a bụ na enwere akụkụ etiti nwere obere okwu. - Ee. - Yabụ, ị na - agbagha ihu igwe - Yeah. - Uh, nke ahụ ziri ezi, mana enwere ihe ole na ole ekwuru maka ya.
Okporo ụzọ dị ezigbo mma.- Ee.- Ọ bụ ụlọ nkwari akụ anyị na ya.- Nke ahụ bụ ezigbo ebe.- Ihe dị mma, ya mere ọ na-eme dị ka ntọala ntọala.- Ee.- Ma na-esi ísì ụtọ ahụ bụ ngwa ngwa, ọ bụghị oru .- Ee.- Enwere otutu, ị mara, enweghị ọtụtụ nkuku, ọ kwụ ọtọ, yabụ enwere m ike ịgbadata ngwa ngwa.
Mana ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya anya ugbu a, Mana ọ bụ ihe ịtụnanya. (Joy music) Yabụ, otu ndụmọdụ ndụmọdụ ndị Everest ndị agha m gwara m nyere m bụ ma ọ bụrụ na ị mee nke ọ bụla n'ime ihe ndị a, gbalịa inweta nkwado dịka ị nwere ike n'okporo ámá. Ya mere, ọ dabara nke ọma na enwere m ụfọdụ ndị enyi ụwa - A na - ekele di m - echere m nka ịgba ịnyịnya ígwè, nri? - Ee, echere m nke ahụ, echere m. (Ollie na-achị ọchị) - Ma, ọ naghị eme kwa ụbọchị na onye mmeri nke ụwa na-adọkpụ ma na-elekọta gị n'ụlọ - ị hụrụ, ọ bụ naanị m ugbu a na ọla nchara ụwa. (Ollie chịrị ọchị) Kwesịrị iweta ọla kọpa. (upbe music) - enyi, ị na-agbagharị ngwa ngwa, ị na-eme m ka ọ dị m ka m na-ezighi ezi mgbe niile.
Kedu ihe jikọrọ gị na ọwa mmiri a? - Ana m apụ apụ taa Chris Froome, 34, 32. Ee, ị ga-atụ ogho iji merie, ị ghọtara? - Ee.- Mee ka ndụ gị dị mfe dị ka o kwere omume n'onwe gị.- Efeghara akwara gị.- Ọfọn, dị mma, dị mma nke akwara ma zere akaghị aka dị ka o kwere mee.- You na-achọkarị izere loops, ee. - Eeh, ee, abughi m nnukwu onye okirikiri.
Ihe niile dị mma, na-adị mma, ka ọ dị na mpaghara 2 obi ka ọ na-aga nke ọma - ọ dị m ka ọ dị m ka kọfị n'ezie. (egwu obi ụtọ) - Ndị mmadụ na-ajụ ihe kpatara ya, gịnị kpatara Everest? Ma enwere ọtụtụ ihe kpatara ya, ọ ga-abụrịrị otu n’ime ha. (flashy music) - Nke a bụ nke mbụ iteration, m na-eche ihe ọma, ijeụkwụ dị mma, m ga na-aga ugbu a otú m ga-agbaji ya ala ụmụ, dị nnọọ ngwa ngwa ma dị ka mma dị ka m nwere ike, echiche ndị gbara ya gburugburu, lee nke a, ọ dị ịtụnanya, ọ dịka paradaịs, ọ dị mma ị ga-ahụ n'oge na-adịghị anya! (egwu obi ụtọ) ikwugharị abụọ.
Naanị m na-anwa idebe otu ụzọ ahụ dị ka nke mbụ, nke m bụ ụdị obi obi na mpaghara 2 ma ọ bụ ihe dị ka 250 watts na ijeụkwụ ahụ. Ejula gị oke. Ọ bụ ogologo ụzọ.
Ma m na-aga Achọrọ m ịme ihe Peter Sagan, nke bụ ezigbo ọrịrị m, ọ bụ, ọ bụghị, ọ bụghị nke dị elu. (egwu elektrọn) adị m mma. Ma mgbe ị rutere n'akụkụ nke elu ugwu na-ahụ anya na, ị maara, ihe dị ka ụkwụ 2,100, ya mere ọ nwere mmetụta, mana (gasping) ihe niile dị mma.
Anọgidere m na-achọ ịkwụsị ma were foto Instagram mana nke a ga-abụ mbibi m, lelee nke a! (chị ọchị) Music) Ọ dị mma, ga-aga n'ihu ugbu a. Achọghị m ka ọ gbaa ọchịchịrị. (Obi ụtọ dị egwu) - Ọsọ ọsọ, nkwụsị olulu ọsọ ọsọ - Ọ ga-ezuru otu croissant? - Ee - Nke ahụ pụtara, Ahụtụbeghị m ka mmadụ rie otu okpukpu n’otu nkịta. (chị ọchị) Nke ahụ bụ nzuzu! Nke ahụ dabara adaba. Achia nkpu ugbua, achila nkpu.
Nke ahụ nwere ike imebi ya. (Obi ụtọ dị ụtọ) - Ollie, ọ dị m nwute na m hapụrụ gị maka ole na ole. Ya mere, anyị kwughachiri otu ọnụ wee mechaa ya kemgbe asatọ ma ugbu a ị nọ n'apata ụkwụ 10 nke Valparola.
Kedu ka ọ dị gị? - Ike Gwụrụ, M na-ari ari. Nke ahụ bụ ihe kachasị ike m metụworo.- Mba, mba, ị naghị ari, enyi.
Na-arịgo ma na-agbada ngwa ngwa. (Ollie na-achị ọchị), eh, mma, ị nọ n'ezie, m na-ekwu, ị nọ nso ebe ahụ. Ọ bụ ugbu a naanị abụọ na ọkara ka ọ bụ eziokwu.
Ọ bụ naanị ụlọ agbatị ugbu a, mana echeghị m na a ga-enwe agba ọsọ, Em - N'ezie, nke ọma, ị gaghị eso onye ọ bụla agba ịnyịnya nke mere na ọ dị mma. (ọchị) Echere m na ọ ga-abụ gị, ị ga-eme ya, ọ kwesịrị isi ike, nri? - Ee - Kwesịrị ịbụ ihe ịma aka, ma, ee, m ga-ekwu, ị nweghị obi ụtọ dịka ị n'ụtụtụ a. (ọchị) - Oh nwoke. (egwu na-ada ụda) - Ọ dị m ka ọ bụ naanị ihe efu.
M iri ari ma dị ka m na-aga. Agaghị m akwụsị. Ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na mụ emechaghị nke a, aga m achụpụ ya na Yorkshire.
Agaghị m enwe ike ịlaghachi ebe ahụ ọzọ wee gosi ihu m. Ya mere, m na-ekwu na ọ bụghị ịmecha ya abụghị nhọrọ m na-eche banyere ya, ọ bụ ịsa mmiri - karịa nke ọma, dị ka ọtụtụ ice cream ma echere m na ọ bụrụ na ịchọrọ ịme Everesting bịa becausetali n'ihi na ọ kachasị mma ebe iri nri? - Ee.- Ice cream, pasta, pizza.- Ee, mana ịchọghị ihe ọ bụla dị ụtọ, ị chọrọ? M na-achọkarị nnu, nnu na-enweghị nri - Salted caramel ice cream - Ee. (ọchị) (egwu obi ụtọ) - enwere m mmetụta na m na - ejegharị nwayọ ugbu a - na elu na ala, Ollie, nanị na elu. (Joy music) - Naanị ugboro abụọ ọzọ.
Amaara m na m ga-emeli ya. Ọ ga-esi ezigbo ike, ọ ga - adị, ọ gaghị adị mma, mana ama m na m ga - emeli ya. Amaara m na ihe ịma aka a ga-esi ike, mana echeghị m na ọ ga-esi ike.
Nke ahụ bụ nzuzu, Abụ m. Nke a siri ike. Ọ bụ ihe kachasị ike m meworo ne.
Lelee ọnọdụ nke ịrị elu a, ọ bụ nkwanye ùgwù. (Egwu obi ụtọ) - Ollie! Ọ dị mma, Ollie! (mkpịsị aka) - Nke ikpeazu - Na ọ naghị adị m mma - Oh, dị ka ị nwere snot, ndo. Imi na-agba imi. (ọchị) - Oh chukwu.
Ọ fọrọ nke nta ka m malite ịmalite ikpeazụ m ugbu a, enweghị m ike ichere ịkwụsị. (ọchị) Echere m na ihe dị ka elekere elekere ma ọ bụ karịa, m ga-enwe ọ greatụ. M ga-eme ya.
Aga m eme ya, aga m eme ya. (Upbeat music) - Mee ya maka Yorkshire, Yorkshire! (Upbeat music) - Whew, emere m ya! Emeghachiri ugboro iri na abụọ nke Valparola, m rịgoro banyere 9,200 mita na njedebe ihe mara ezigbo mma bụ ihunanya na uri na ịdị obi umeala banyere ịme ụdị ọrụ a naanị, n'ọchịchịrị, na oyi. N'ebe a.
Mana m na-ekwu, nke a bụ ihe m ga-echeta n'oge ndụ m niile. Ana m arịọ mgbaghara maka enweghị àgwà dị n'isiokwu a ugbu a. Batrị m niile anwụọla.
Ma ee, nke ahụ bụ epic. Ọ dị mma na m ga-anọkwasị n'ọchịchịrị ugbu a. N'ihi na ụmụ nwoke ahụ na-eche biya.
Yabụ na ọ dị mma, ka anyị mee ya. (Ìgwè mmadụ chịa) - Yehay, ọmarịcha ọrụ enyi! (ọchị) - T Hey, nwoke. (ọchị) - Etufula ya - Nke a bụ nnukwu ụbọchị, mmadụ - I lere anya karịa ka anyị nwere karịa gị.
Enwere m obi ụtọ nke ukwuu - nke a bụ biya kacha mma n'ụwa. Echere m na ọ bụghị Tetleys, mana ọ ga-ezuru ya na ndụ m. M (afụcha m ume) enweghị obi abụọ.
Echere m na n'ozuzu, dịka m, otu akụkụ buru ibu nke ịgba ígwè na-ama onwe gị aka ma mezuo ya. Na ma ihe ịma aka a dị? na Tour de France, merie Tour de France, gbagoo ụwa niile, naanị gbaa kilomita 80 ma gbaa onwe gị aka ma nwaa ya. Edebere m onwe m ihe ịma aka na-achị ọchị taa, mana agbalịrị m ime ihe ọma. - Ezigbo ọrụ, enyi.
Enwe biya. (Onye igwefoto na-eti mkpu) Nweta onwe gị ụfọdụ mgbede. - Eeh.
Echere na ị masịrị ile isiokwu a. O siiri ya ike. Ma, ọ bụrụ otú ahụ, biko nye ya mkpịsị aka aka.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ a isiokwu banyere gia na igwe kwụ otu ebe m mere ihe dị nnọọ ịtụnanya wee pịa ebe a.
Olee otu ike Everesting na igwe kwụ otu ebe?
Udochibusiri ike, ọbụna maka uru. 29,029 ụkwụ (8,848 mita) na-ewe obere oge, agbanyeghị otusiri ikeị bụ Mgbalị Winder, nke o mechara na ogologo Flagstaff, na mpụga Boulder, Colorado, bụ njem kachasị anya ya. O were ya awa iri na atọ na nkeji ise, kwụsị njedebe - 12:37 na-emegharị oge.June 10. 2020bọchị 2020
Ọ dị oke njọ, ọ dị m ka ya bụrụ na m nwere ntakịrị ntabi anya n'ihi ya ọ ga-ewe ogologo oge iji kpọọ nkụ ugbu a ma enweghị m ike ịme nke a na-enweghị ha chọrọ ịkwụsị nke a, kedu ihe ụmụ okorobịa, m bụ q na taa M ga-eme ihe niile na efu omume Everesting bụ na ara mgbatị ahụ siri ike ebe ị na-ahọrọ ịrị ugwu ma na-agba ọsọ igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ na-agagharị agagharị ma ọ bụ na-agba ịnyịnya ígwè dị elu nke ugwu Everesti m kwesịrị ekwesị nke mere na ọ dị m ka nke ahụ Enwere m ohere, yabụ m ga-enye gị ụmụ nwoke ngwa ngwa nke ntọala m n'ihi na enwere m ọtụtụ ihe na-aga ebe a, yabụ nke a bụ Kicker Climb, ọ bụ ihe nkedo ime ụlọ, ọ dịkwa mma karịa Bluetooth na nke ahụ Egwuregwu ejikọrọ na ọ ga-ekwe ka igwe kwụ otu ebe m nwee otu ụdị egwuregwu a na-agbanye ụkwụ ma ọ bụ gbanyụọ ma jikọọ maka ịnyịnya ime ụlọ ma ọ bụ maka ịnyịnya n'èzí na n'ikpeazụ bụ onye na-azụ ihe na-agba ọsọ na nke ahụ ga-enwe ike ịdebe etu m siri sie ike Gbalịa inweta Everest achọrọ m ahọrọ ime ihe niile n'ime Zwift, ha lf the hill, a na-akpọ ichose epic ko and ford, o kwesiri ime ugwu a ugboro iri abụọ na abụọ iji mezue mbọ m. Aghọtara m na echefuru m ịgbanwe avatar m ka m dị ka onye ọcha dị afọ 30 m dị ihe dị ka nkeji 47 n'ihe dịka ụkwụ 1035 yabụ naanị m nwere 28,000 ka m laa, kedu ka ọ ga-esi sie ike yabụ m mechara rụchaa nke mbụ m Ugwu, ugbu a, m nọ na nke mbụ m na-arịgo, yabụ di m na-aga naanị ya ma mee ihe a, a ga m ata nri ngwa ngwa n'oge a, m na-ejuputa ma na-alaghachi ugbu a, yabụ enwere m olile anya na m ga - enweta ihe a niile, ebe m gbara ihe dịka puku ụkwụ abụọ maka ihe dị ka otu elekere na nkeji iri atọ gụnyere Turtleyeah ji nwayọ ghọta na m ga-anọ ebe a nwa oge oh ebe ọ na - aga ma enwere m ihe ijuanya na nkeji ise ngwa ngwa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe mere ebe a bụ na emechara m ugwu nke abụọ ma amaghị etu m ga-esi wee gbanye ihu, yabụ m gbadara mgbada K-1 forp kama ịlaghachi, kama ịlaghachi ebe m nwere? aga m ga-aga epickale na azu azu nke nwere onu ogugu kariri nke fordi amaghi ihe m ga - eme, ee ndudue mbu m agaghi eme nke a ozo m ga - enwe ufodu ndi enyi m sonyere m na ndi otu cyrus nanị mmadụ ole na ole ịgwa onye owu na-ama okwu kedụ ka ị si nọrọ na awa ole na ole gara aga ya mere ọ dị m mma na nke a bụ oge mbụ m nwetara ebe a, nwee obi ụtọ ogologo oge, achọrọ m mgbanwe a n'ihi na ọ bụ otu a ka m si egosi ya nye onwe m, dịkwa mma, enwere m na dịka ị maara, otu mgbe anyị ruru ya dị ka elekere iteghete iteghete iri kedụ otu ị chọrọ isi kwụsị ya ma ọ bụ na ị chọghị ịkwụsị ya ugbu a, asị m ee, mana onye ma iji nweta ya ga-eleba anya n'okwu ahụ, tụmadị na ebe ọ bụghị ihe gbasara ahụike, ọ gbasara etu i siri kpebisie ike? ị ga-enwe oge dị njọ ma ị ga - enwe ezigbo oge mgbe ị nọ n'ọnọdụ siri ike na otu n'ime ferratas, were ihe iri nri na oge ọzọ ọ ga - aka mma n'ezie sp ace ihe niile ee nke ahụ dị ka n'ezie ọgụ ị na-ahapụ ị dị ka onye nzuzu Aga m eme ihe n'eziokwu ndị otu Saịrọs na-eti mkpu na ụmụ okorobịa ndị a hụrụ n'oge nnọkọ mbụ ahụ na olu m amalitela imerụ ahụ yabụ ọ bụ ihe m masịrị Watchfor M ga-eri nri m n'ezie ngwa ngwa, na-a drinkụ a bit nke Gatorade ị maara na dị nnọọ na-agbalị iji nweta ụfọdụ refueling m havent asa ahụ ma ị maara ihe ọ bụla m na-amasị na-asa a obere bit ume inya ịnyịnya na cyrus otu dị ukwuu, ha dị ukwuu, ha na-agba ume nke ukwuu um ha nyere achọrọ m ụfọdụ ndụmọdụ dị mma, achọrọ m ijide n'aka na m riri nri iji nọrọ na mmiri mana m dị njikere ịga ka m wee rie nri, laghachi na ya ọ ga-abụ eziokwu, enwere m mmetụta mgbochi mbụ m na-abịa na m ga-abịa n'oge mana m cramp ebe a oh oh mma m ga jidere a banana ugbu a, ọ bụ cle arly na ụgbọ ala a, nke a bụ ihe ọzọ, onye ga-atụgharị na Uhfan ahụ echere m na m na-arụ ezigbo ọrụ ma ọ bụrụ na m nọrọ ueled na hydrated n'ụzọ niile ziri ezi ikpeazụ gbatia ekpe ọma m n'ezie na m nwere ụfọdụ twinkies dị ka nke a bụ n'ezie otu n'ime ọkacha mmasị m snacks m nụrụ na ha na-vegan kwa oke oh mara mma oreosall nri m na-dị nnọọ na-ewere m ezumike m na-asa ahụ n'ezie ngwa ngwa m nwere a bolognese akwukwo nri noodle na nwekwara gotad kpo oku na m butt n'ihi na ọ na-ewute Badi n'ezie na-achọ ịsacha ihe m, mana igwe m na-asacha ihe dị ka ọkara ọkara ebe ahụ wee jupụta na mmiri, yabụ ugbu a ọ ga-ewe ogologo oge iji kpoo ha ma enweghị m ike ịme ya na enweghị ha, yabụ ka anyị hụ ihe na-eme mana m ka na-achọ imecha ọ bụ n'ezie o siri ike karị iri nri m lere anya ebe m na-eguzo ebe m ga-aga dị ka ọ dị oke mbubreyo igwe kwụ otu ebe a bụ hello, na-eme ka m na-agba ọsọ ọsọ m agaghị igwe kwụ otu ebe n'agbanyeghị na anyị nwere oge maka ya, ọ dịzi ka elekere ise nke ụtụtụ, ịmara na m dịka m achọghị ' Echere m na m nwere ike ije ije ọzọ, enweghị m ike ịme ka achọrọ m ịga n'ihu enweghị ike k k ugbu a ọ bụ mana enweghị m ume mana hapụ m ka m nọrọ ọdụ otu ahụ ka anyị nọdụ maka nke abụọ, nwee mmiri ụfọdụ, drinkụọ ihe ọ gụ gụ na-atọ ụtọ, gbalịa ịmasị ya, gbakọta ma mgbe m nwetara ya na 30 Enweghị m ike ịnwe nkeji iri anọ na ise, a na-akpọ ya Quizi, nke ahụ bụ tupu m enwee mmetụta nke ịbụ onye meriri emeri, ọ dị m ka m mere nke m kachasị mma ma na-eme ihe n'eziokwu, echere m na ọ bụrụ na uwe ogologo ọkpa a nọ na igwe ịsa ahụ, aga m enwe n'eziokwu, ọ dị m ka m bịaruru nso mana ee, m na-eri nri a na-enwe olileanya na ọ ga-eme ka m dị mma karịa Sanwichi nri ụtụtụ nke nwere ike ị cheụrị m ụtọ. Quentinwake-up just chọrọ ime ka ị mara etu mpako m si bụrụ gị bụ nke ahụ bụ ihe ịtụnanya na-agba ịnyịnya mbụ m enweghị ike ikwenye na ị mere nke a, mana ọzọ m nwere ike? ị na-eme ihe niile nke ọma na ị ga-aga n'ihu na-eme nke ọma ihe m nụrụ site na igwe ịsa ahụ gị gbawara, enweghị m ike iguzo quentin uh ekele na njem manuh nke bụ ihe nnwale na-enweghị atụ na Eversting Eversting n'ozuzu abụghị egwuregwu, Echetara m na m ji gị nya ụgbọala m n’abalị, bilie n’ụtụtụ echi ya wee hụ na ị ka nọ ebe ahụ ma na-apụ, mana achọrọ m ịkele gị ekele, uh, onye ọrụ mara mma, mara mma nke mere m chere. ihe di oh dika ihe ojoo dika um anyi emechaghi ya mana onye obula no n’azu m ee o bu ihe uto obu ezigbo ihe omuma ma obi di m uto nke ukwuu ma enwere m olile anya na m gha anwa ozo n’ihi na echere m Enwere m ike ịme ya ka anyị hụ ibe anyị
gopro ọlaọcha amazon
Ogologo oge ole ka Everesting na igwe kwụ otu ebe?
Ị nwere ikeEverestọnụ ọgụgụ ọ bụla dị elu n'ụwa site na ịbanye nrịgo 8,848m nke otu ụzọ ahụ n'otu ụzọ. A na-ekwe ka agbaji; ụra abụghị. Ahụkarị mgbalịnaraihe dị ka awa 24 mana nanị ịmecha ihe ịma aka ahụ bụ akara dị ukwuu nke mmezu. Dị ka onye mbụ, ihe mgbaru ọsọ gịkwesịrịna-emecha n'enweghị nsogbu.Jenụwarị 9 Dec 2019
Gịnị bụ ndekọ maka Everesting na igwe kwụ otu ebe?
Ọnye na-bụ ọdụdụ nwa Everest na igwe kwụ otu ebe?
NWA gbara afọ iri na anọ ghọrọonye ntàmgbe ọ bụla iji mezue ihe na-agwụ ikeịgba ígwèịma aka ma bulie ego maka ọrụ ebere n'ụzọ. Zak Burgess si Clitheroe na-aga ụlọ akwụkwọ sekọndrị Ribblesdale ma ọ dịbeghị anya ọ gụchara The Epic Everesting Challenge na ọ bụ otu n'imeọdụdụ nwan'ụwa ime nke a n'ime awa 28.Ọgọst 6 2020
Gịnị bụ ezigbo Everesting oge?
ỌZỌ: 6 Killer na-agba ịnyịnya ígwè Workouts
'Oge nkeziiji wuchaa iheUdochidị n'agbata awa 18-22, 'ka Andy van Bergen kwuru, onye dechara ọtụtụ nsogbu ahụoge. “Ọ na-achọ ọzụzụ ọnwa ole na ole iji nwaa.”
Everest ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe?
Nke a bụezigbo igwe kwụ otu ebeọ bụrụ na ohere adịghị oke. Nwere ihe ngosiputa ngwa ngwa na ogwe aka ngwa ngwa ka o wee noo kpamkpam na mgbidi. rkj__ kwuru, sị: 'Ọ dị ịtụnanya otú ndị mmadụ nwere ike isi mee ka ịnya ịnyịnya ígwè yie ihe siri ike na ịntanetị.'Ọnwa Isii 19. 2010 r.
Onwere onye gbara ugwu Everest?
Everesting bụ aịgba ígwèịma aka ebe ị na-ahọrọ ugwu ọ bụla ma ọ bụ ugwu ọ bụla ma gbaaeluya ugboro ugboro ruo mgbe ị gụchara 8,848m - elu nke MtEverest. JJ Zhou si China ka ghọrọ onye mbụ mere yaEverestn'onwe ya.
Nye bụ onye nke ọdụdụ nke rịgoro Ugwu Everest Afọ ole ka onye a dị?
Jordan Romero (amụrụ na Julaị 12, 1996) bụ onye Americaugwuclimber onye bụ afọ 13ochiemgbe o rurunzuko nke Ugwu Everest.
Kedu ka ndị ugwu si arịdata site na Ugwu Everest?
Iji ruo nzukọ ahụ,ndi ugwuwụsara paụnd ole ha nwere ike were were ha naanị obere canisters nke abịakọrọ oxygenimeya n'elu na azụala.05.26.2019
Kedụ ka m ga-esi arị ugwu Ugwu Everest n'efu?
Ka ewererịgoro ugwu Everest n'efu, ị ga-achọ onye nkwado. Malite na ụlọ ọrụ dị na mpaghara, wulite ma gosi ha mgbasa ozi mgbasa ozi siri ike. Ẹtop ha na ọ bụghị nanị gị apụghị iru ma na-akpali akpali ma ọ bụ na-akpali akpali akụkọ n'azụrịgoro. I nwekwara ike ịtụle ịkpọtụrụ ọrụ ebere.